'माइ प्रमिस'लाई खै त नायिकाको साथ ? – Namaste Filmy
'माइ प्रमिस'लाई खै त नायिकाको साथ ?
[dropcap]च[/dropcap]लचित्र ‘माई प्रमिस’ पौष १८ गते रिलिजको तयारीमा छ । फिल्म रिलिज हुन करिब तीन सातामात्र बाँकि रहँदा फिल्मका निर्माता तथा नायक रमेश चन्द्र राई तन मन लगाएर प्रचारप्रसारमा जुटेका छन । उनीमात्र हैन फिल्मका निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बो, कलाकार विल्सनबिक्रम राई लगायतले पनि फिल्म प्रमोसनमा सहयोग गरिरहेका छन । तर फिल्मका मुख्य पात्र नायिका केकी अधिकारी कहाँ छिन । उनले चाँहि प्रदर्शनको सँघारमा आइसकेको आफु अभिनित फिल्मको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्याउनुपर्दैन ?
सोमबार गरिएको फिल्मको प्रेस मिटमा पनि केकीको उपस्थिति देखिएन । त्यस्तै उनले माई प्रमिसको बारेमा कहिकतै मिडियामा बोलेको देख्न र सुन्न पाइएको छैन । न त समाजिक सञ्जालहरुमा माई प्रमिसको पोस्टर तथा ट्रेलरहरु शेयर नै गरेकी छिन ।
त्यसो त केहि साताअघि विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी केकी अहिले कहाँ छिन ? माई प्रमिस युनिटलाई जानकारी समेत छैन । तर केकी हाल फिल्म हाउ फन्नीको छयांकनमा ब्यस्त छिन । जतिसुकै ब्यस्त भएपनि आफु अभिनित फिल्मको प्रमोशनको लागी केहि समय छुटाउनुपर्ने हैन र ? उनले माई प्रमिसको प्रमोसनमा किन सहयोग गरिरहेका छैनन त ?
'हवल्दार सुन्तली'को गीत रिलिज । गीत सुन्नुहोस ।